ကုန်ကြမ်း DMAA အမှုန့် (13803-74-2) 1,3-dimethylamylamine | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / Prohormone / DMAA အမှုန့်
SKU: 13803-74-2. အမျိုးအစား: Prohormone
1,3-dimethylamylamine (DMAA) အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်တိုးမြှင့်စွမ်းအင်ကိုပေးအစားအသောက်ဖြည့်စွက်အတွက်သော့ချက်ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ဓာတုထုတ်လုပ်အာရုံကြောလှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း DMAA အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: DMAA အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 199-199.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ကုန်ကြမ်း DMAA အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို in steroids အစဉ်အဆက်
Methylhexanamine လေ့ 1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA) အဖြစ်လူသိများသို့မဟုတ်ရိုးရိုး dimethylamylamine (DMAA) ။
DMAA ကုန်ကြမ်း powderUsage
1,3-DMAA ၏ပုံမှန်စတင်ထိုးသည့် 10-20mg အကွာအဝေး၌တည်ရှိ၏နှင့်နောက်ဆုံးတွင်တစ်နေ့လျှင် 40-60mg အထိရောက်ရှိ, ဒီသောက်သုံးသောအကွာအဝေးကိုထောကျပံ့ဖို့မအမှန်တကယ်သက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိပေမယ့်စံဆေးညွှန်းဖြစ်ဟန်ဖြည့်စွက် 1,3-DMAA ဘို့အထိ စျေးကွက်ပေါ်မှာ။
ရှစ်ယောက်ျားတစ်ဦးနေ့ချင်းညချင်းအစာရှောင်သည်အောက်ပါနံနက်ယံ၌ဓာတ်ခွဲခန်းမှအစီရင်ခံသည်နှင့် DMAA ၏တစ်ခုတည်း 25 မီလီဂရမ်ပါးစပ်ထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သွေးနမူနာ 24 နာရီ Post-DMAA စားသုံးမိခင်နဲ့တဆင့်စုဆောင်းနဲ့ high-performance ကိုအရည် Chromatography-အစုလိုက်အပြုံလိုက် spectrometry သုံးပြီးပလာစမာ DMAA အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အနားယူနှလုံးခုန်နှုန်း, သွေးဖိအားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုလည်းတိုင်းတာခဲ့သည်။
တဦးတည်းဘာသာရပ်ကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော DMAA အဆင့်ဆင့်မှဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောခုနစ်ခုပါဝင် analysis DMAA 20.02 ±5L ကိုနာရီ-1, 236 ± 38 L ကိုဖြန့်ဖြူးထားတဲ့ပါးစပ်အသံအတိုးအကျယ်နှင့် 8.45 ± 1.9 နာရီ၏ terminal ကိုဝက်ဘဝ∙တစ်ဦးပါးစပ်ရှင်းလင်းရေးခဲ့ပြသခဲ့သည်။ အချိန် lag သင်တန်းသားများအကြားမတူညီကြ extravascular အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါစောင်ရေအတွက် DMAA ၏အသွင်အပြင်အတွက်နှောင့်နှေးပေမယ့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 8 မိနစ် (0.14 ± 0.13 နာရီ) ပျမ်းမျှ။ အားလုံးဘာသာရပ်များများအတွက်အထွတ်အထိပ် DMAA အာရုံစူးစိုက်မှုစားသုံးမိပါကအောက်ပါ 3-5 နာရီအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့် ~ 70 ng ∙ mL-1 တစ်အတောအတွင်းအတူဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးအလွန်ဆင်တူခဲ့သည်။ နှလုံးခုန်နှုန်း, သွေးဖိအားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် DMAA ကုသမှုအားဖြင့်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သညျ။
အမေရိကန်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးအေဂျင်စီ (FDA) ကလက်ရှိသာမန် dimethylamylamine (DMAA) လို့ခေါ်တဲ့အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အသုံးပြုတဲ့လှုံ့ဆော်င်အားလုံးအစားအသောက်ဖြည့်စွက်၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုပယ်ဖျက်ဖို့ကတတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
DMAA ကိုယ်အလေးချိန်သို့မဟုတ်ကြွက်သားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစေကြောင်းထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုထားတဲ့အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ပစ္စည်းလေးနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေ, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်နိုင်သည်
အဆိုပါ FDA ကသည်နှင့်အညီ, DMAA စားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောနာမကျန်းသို့မဟုတ်သေခြင်းတရား၏ 86 ဖြစ်ပွားမှုစုစုပေါင်းရှိခဲ့သည်။ DMAA ဤအခြေအနေများ၏အမှန်တကယ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းအကြံပြုစရာသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိပေမယ့်အဆိုပါရောဂါ၏အချို့, နှလုံးရောဂါပြဿနာများနှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်သို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါမမှန်ပါဝင်သည်။
DMAA (1,3-dimethylamylamine) အရာများစွာကိုအစားအသောက်ဖြည့်စွက်အဖြစ်ရောင်းချကြပါတယ်, အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ထုတ်ကုန်စျေးကွက်ထားပြီးတဲ့စိတ်ကြွဆေးဆင်းသက်လာသည်။ DMAA တစ်ဦးဓါတ်ပစ္စည်းမရဖြစ်ပြီး, အစားအသောက်ဖြည့်စွက်အဖြစ်စျေးကွက် DMAA ပါဝင်သောထုတ်ကုန်တရားမဝင်ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏စျေးကွက်ဟာဥပဒေကိုချိုးဖောက်။
ဒါ့အပြင် methylhexanamine သို့မဟုတ် geranium ထုတ်ယူအဖြစ်လူသိများ, DMAA မကြာခဏ "သဘာဝ" လှုံ့ဆော်အဖြစ်မွှမ်းတင်လျက်ရှိ၏ သို့သော် FDA က DMAA အပင်များတွင်သဘာဝရှိကွောငျးကိုညွှန်းမဆိုယုံကြည်စိတ်ချရသောသိပ္ပံသတိထားမဟုတ်ပါဘူး။ DMAA တစ်ကြိမ်မှာနှာခေါင်း decongestion များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့သော်လည်း, ကမရှိတော့ဒီအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နှင့် DMAA မရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုကိုယနေ့အသိအမှတ်ပြုသည်။ DMAA, အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဖိန်းဓာတ်ကဲ့သို့သောအခြားလှုံ့ဆော်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်စားသုံးသူတစ်ဦးကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ DMAA ယူပြီးသွေးဖိအားမြှင့်ခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြဿနာများကိုအသက်ရှုမဝြခင်းကနေအထိနှင့်နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုကိုဖို့ရင်ဘတ်အတွက်တင်းကျပ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
အဆိုပါ FDA ကကြောင့်သူတို့တင်ပြကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များမှ DMAA ဆံ့ကြောင်းအစားအသောက်ဖြည့်စွက်အဖြစ်စျေးကွက်ထုတ်ကုန်ဝယ်ဖို့သို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့မဟုတ်စားသုံးသူအကြံပေးနေဆဲဖြစ်သည်။
DMAA-based productsor ဖြည့်စွက်၏ထုတ်လုပ်သူဖြင့်တောင်းဆိုမှုများအချို့ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး, 1,3-dimethylamylamine အဓိကအားဗဟိုအာရုံကြောစနစ်လှုံ့ဆော်အဖြစ်အစေခံရန်ဟုဆိုနိုငျပါသညျ။ ထိုထုတ်ကုန်များ၏အလားအလာအကျိုးအမြတ်သိမြင်မှုစွမ်းရည်ကိုတစ်ဦးတိုးမြှင့်ဖို့အဓိကအားဆက်စပ်နေပါတယ်။
၎င်း၏ stimulatory သက်ရောက်မှုရန်, DMAA တစ်ဦး Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းဖြည့်စွက်အဖြစ်ကာယဗလအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာနေသည်။
DMAA စွမ်းအင်ကိုလှုံ့ဆျော။ တစ်ဦးက 2011 လေ့လာမှု DMAA DMAA ခန္ဓာကိုယ်လှုံ့ဆော်ပေးသောအားဖြင့်မူလတန်းယန္တရားများ၏တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်နှလုံး rate.This တိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲသွေးပေါင်ချိန်တိုးပွါးကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ နောက်ထပ် 2012 လေ့လာမှု DMAA သင် it.This ကြောင့်သုံးနေစဉ် DMAA စားသုံးမိပါသွေးဖိအားတိုးပွါးကြောင်းဆိုလိုပေသည်ယူပြီးကြသည်မဟုတ်သည့်အခါသွေးဖိအားအနားယူမသက်ရောက်ရှိသည်ဖို့ပြသခံခဲ့ရကွောငျးဖျောပွခဲ့ပေမယ့်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများပုံမှန်ကျိန်းဝပ်အဆင့်ဆင့်မှသွေးပေါင်ချိန်ပြန်ချွတ်ဝတ်ဆင်ကြတခါ ။
DMAA မီးလောင်အဆီကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သူတို့တိုင်အောင်တဆယ်လေး days.DMAA လည်းတိုးပွားလာအဆီပြိုကွဲခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဖို့ထင်သော 32 ကျန်းမာလူကြီးများအတွက်တိုးမြှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်များအတွက်တစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးဆေးတောင့်မျိုချမိသည့်အခါ DMAA, Pro ကို OxyELITE, င်တစ်ဦးကအစားအသောက်ဖြည့်စွက် 12 ကျန်းမာလူကြီးများအတွက်ခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးမှုလှူဒါန်းခဲ့ ရေရှည်မှာအဆီဆုံးရှုံးမှု။
DMAA ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ ကြွက်များတွင် DMAA င်တစ်ဦးဓါတ်ဖြည့်စွက်၏မြင့်မားသောဆေးများလေ့ကျင့်ခန်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာသည်။ သို့သော်နေ့စဉ်စားသုံးမှု4ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
DMAA ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ အားကစားလေ့ကျင့်ရေး၏ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတစ်ဦးက 2015 လေ့လာမှု DMAA င်တစ်ဦးဓါတ်ဖြည့်စွက်၏ 5.5 ပါ g ၏စားသုံးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
III ကို။ DMAA ကုန်ကြမ်းအမှုန့် HNMR
ကုန်ကြမ်း DMAA ကုန်ကြမ်းအမှုန့်စျေးကွက်
aasraw ထံမှ DMAA အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
AAS ကုန်ကြမ်းပါးစပ်အသုံးပြုမှုများအတွက်သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 98% DMAA ကာယဗလမှကုန်ကြမ်းအမှုန့်သို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများပေးပါသည်။
ကုန်ကြမ်း DMAA အမှုန့်ချက်ပြုတ်နည်း:
5 ဆ Creatine သည်5ဆ bcaa'a 200-400 ဖိန်း 3.5 ဆ beta ကို alanine (ဉျြးဖဉျြးပေါင်းပါမယ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကာကွယ်ပေးသည်)6ဆ citrulline malate (dat pump) 1.2 ဆ ALCAR (လှုံ့ဆော်ပေါင်းအာရုံ) DMAA 50 မီလီဂရမ်သို့မဟုတ်သုညနှင့်အတူ .050 ပါ g အရသာ MG Cal propellant ရောနှော
သင်ဤ shit ချိန် bruh ဒီတော့တစ်စကေးကိုဝယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံ DMAA သင်တက် fuck ဆိုတဲ့လိမ့်မယ်။ သငျသညျကို pre-လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်အရမ်းမှီခိုခံစားရချင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မသာတစ်ချိန်ကအပတ်က DMAA ဖြည့်စွက်တာကြောင့်မကြာခဏအသုံးပြုသောလျှင်အပေါ်မှီခိုမဖွစျသငျ့အားလည်းကောင်းသောခံစားရစေသည်။